Maitiro ekuisa iyo nyowani iOS 8.3 emojis pane yakasungwa iPhone | IPhone nhau
Ignacio Sala | | Cydia, Jailbreak, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kuuya kweIOS 8.3 kwakatiunzira zvinyorwa zvinoverengeka pakati pavo uye imwe yevakanyanya kutaurwa yakange iri emojis yemarudzi akasiyana siyana kunze kwemamodeli matsva akati wandei anga asati amboonekwa kusvika pari zvino, senge Spock achangonyangarika, anomiririrwa naLeonard Nimoy. Dambudziko rakatambura nevashandisi vazhinji nderekuti Kana iwe usina iyo yazvino vhezheni yeApple 8.3 yakaiswa, haugone kugamuchira iyo nyowani emojis, panzvimbo pezvo ivo vanogashira sikweya nhema kana nemutorwa mukati.
Kutenda kupaza kwejeri uye nguva yakapfuura kubva kuburitswa kweIOS 8.3, isu tinogona ikozvino kunakidzwa ne emojis nyowani pane edu zvishandiso tisingafanirwe kugadzirisa yazvino vhezheni uye kurasikirwa neJailbreak nezvose zvayinotipa. Zvisinei nenhau dzakaunzwa neIOS 8, ndichiri kufunga kuti Jailbreak ichiri kudikanwa kuti ndikwanise kuwana zvakanakisa kubva pachigadzirwa chedu uye nekuda kwechikonzero ichocho ini handironge kugadzirisa mudziyo kunze kwekunge ndawana Apple Watch (inoda iOS 8.2) kunyangwe tikazvipa nguva, iko kunyorera kuchazoonekwa muCydia kuti ikwanise kunakidzwa neApple smartwatch pasina kurasikirwa neJailbreak.
Isa iOS 8.3 emojis pane yakavharwa iPhone
Kutanga tinoenda kuCydia, tinya Fuentes uyezve mukati Hora.
Zvino tinya Wedzera uye isu tinonyora repo.biteyourapple.net
Kana mafonti angotakurwa, isu tinobva tananga kumusoro kutsvaka, iri munzvimbo yepazasi kurudyi kwechidzitiro uye nyora Emoji iOS 8.3+, Ine vhezheni nhamba 1.0-47
Iyi tweak ine saizi inofungidzirwa yema megabytes makumi mashanu, saka zvinokurudzirwa kuti uzviite kubva kubatanidza yeWi-Fi kuti ikurumidze uye chengetedza mashoma anokosha emamgabhayiti emutero wedu.
Kana ichinge yaiswa vachatikumbira kuti titangezve chitubu kuitira kuti shanduko dzinodiwa dziitwe uye emojis nyowani kutsiva eakare akaiswa natively kubva kuIOS 8.
Kana paine chikonzero chero chipi zvacho iyo tweak isingashande mushe, unofanirwa kuisunungura uye kuisa iyo tweak Emoji iOS 8.3+ [FIX] chete kana tiine matambudziko neiyo tweak Emoji iOS 8.3+.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Maitiro ekuisa iyo nyowani iOS 8.3 emojis pane yakasungwa iPhone
Ndinovimba kuti mumwe mugadziri anounza kuenderana kweiyo Apple wachi, sezvaakaita neiyo android wachi !! Kana iye akaiburitsa kunze ingave iyo ostia! Kwaziso
Ini ndazviburitsa nekuti vanhu vanowana yakajairwa emoticon, ese maos uye Android ...
Sezvineiwo ikozvino pane imwe tweak inonzi "Emoji iOS 8.3+ [FIX]" kune avo vane matambudziko nemumwe. Kana ikakubatsira iwe.
Cherif, urikutumira iyo empjis kune chimwe chishandiso chinogona kuiverenga, handiti? Nekuti kana zvisiri pachena kuti vekare chete ndivo vachaonekwa
Ongorora: Ini ndakavaisa mune ios 7.1.2 iphone 4s yemunin'ina wangu uye kana ichishanda, hazvinyatso kudiwa ios 8.2
Pindura kuna Hermilo
mumwe munhu andiudze maitiro ekuita jailbreack yeiyo 8.3
Daniel Esparza akadaro
Yekutanga haina kundishandira, ipapo ndakaidzima ndikaisa iyo FIX uye ini handiwane chero shanduko:
Pindura kuna Daniel Esparza
Iyo iPhone 6S inogona kunge iri hombe kuvandudza kune iyo iPhone yenguva dzese.